सडकमा जनता हिँडेको राज्यले थाहा नपाउने, पत्रकारले कसरी थाहा पाउँछ ? ::प्रधानमन्त्री – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/सडकमा जनता हिँडेको राज्यले थाहा नपाउने, पत्रकारले कसरी थाहा पाउँछ ? ::प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड–१९ को महा`मा`रीमा मिडियाको भूमिकाप्रति आशं`का व्यक्त गरेका छन् । राज्य संय`न्त्रले बाटोमा हिँडेका जनताको बारेमा थाहा नपाएको बेला पत्रकारले कसरी थाहा पाउँछ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आ`शंका व्यक्त गरेका हुन् ।
‘धादिङबाट मान्छे आफ्नो घर जान निस्कन्छन् । बीचमा प्रकट हुन्छन् मान्छे । एउटा कुरा, पत्रकार चाहिँ त्यहाँ कसरी पुगिसक्छ ? त्यहाँको प्रहरीलाई थाहा छैन, सिडिओलाई थाहा छैन । तर, मान्छे हुरुरु निस्केर गन्तव्यतिर लाग्दा पत्रकारलाई थाहा हुन्छ र काठमाडौँबाट क्यामेरा बोकेर पु`ग्या हुन्छ त्यहाँ । कसरी ? रहस्यपूर्ण छैन र ?,’ सरकारी सञ्चार`माध्यमसँगको अन्तरवार्तामा प्रधानमन्त्रीले शं`का व्यक्त गरे ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदूर, श्रमिक र अन्य बेरोजगारहरु काठमाडौँबाट गाउँ जान वा भारतबाट स्वदेश फर्कने क्र`ममा लामो पैदलयात्रा तय गर्नुपरेको कष्ट`पूर्ण दृ`श्य देखिएमा छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा सूचना दिन पनि प्रधानमन्त्रीले आ`ग्रह गरे । ‘कुनै ठाउँमा मान्छे अलपत्र परेको देख्नुभयो भने पर्खिएर त्यो अलपत्रताको, दुःखको प्रशारण भोलिल्ट मिडियाबाट गर्ने होइन । हेलो सरकारको नम्बर त वहाँहरुलाई थाहा होला त्यहाँ बताइदिए हुने थियो । सिसीएमसीमा २० जना मान्छे २४ सै घण्टा स्ट्याण्ड बाइ बसिरहेका छन । त्यहाँ खबर गरौँ । बिजोग दृश्य`मा रमाइलो मा`न्नेभन्दा पनि यसलाई रचनात्मक`रूपमा समाधान गर्न लाग्न सकिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले आरोप लगाए, ‘अघिल्लो दिनको राति खिचेको फोटो भोलिपल्ट ५ः२२ मा अपलोड गरियो । त्यतिबेलासम्म सरकारले व्यवस्थापन गरिसक्थ्यो` तर सरकारलाई थाहा भएन । सरकारलाई जानकारी गराउन अनुरोध छ । सरकारले थाहा पाउने बित्तिकै उनीरुको व्यवस्था गर्छ । जहाँ पुगेका छन् त्यहाँ खाना खुवाएर सरकारले तिनीहरुको व्यवस्थापन गरेको छ ।’ सरकारलाई गालीको फेहरिस्त बुन्नुभन्दा छिटो सूचनाका माध्यमबाट सरकारलाई सूचना दिन आग्रह गरे ।
यस्तो बेलामा सरकारलाई विरोध गर्न अस्त्र`हरु तयार गरेर कसैले पनि खेल्नु नहुने बताउँदै नेपालमा रोग या भोकले कोही म`र्नु नपर्ने जिकिर गरे । ‘यो देश भीखम`ङ्गाहरुको देश होइन । ग`रिखा“नेको देश हो । विशेष परिस्थिति भएकाले आमजनतालाई असुविधा भएको कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘पहिला त भाइरस रोगबाट जीवन बचाउनुपर्छ भनेर एकजुट भइ लाग्नुपर्छ । हामीले राहत वितरणलाई पनि निरन्तरता दिएका छौँ । त्यहाँ कुनै अपर्याप्ता छ भने हेर्न सकिन्छ ।’